ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနည်းဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ Selena Gomez
Hotel Transylvania – 3: Summer Vacation ဆိုတဲ့ animation ကာတွန်းဇာတ်ကားလေးဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်တော့မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကတော့ အဲဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဦးဆုံး Premiere show ပွဲကို Los Angeles မြို့က Westwood’s Regency Village Theatre မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့တင်မကဘဲ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်နဲ့ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို သိမ်းကျုံးရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Selena Gomez လည်း တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမဟာ အဲဒီဇာတ်ကားထဲက သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Mavis ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ရုပ်နေရာမှာ အသံနဲ့ သရုပ်ဆောင်တာခဲ့တာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Get an inside look at the #HotelT3 world premiere! In theaters July 13th. ??
A post shared by Hotel Transylvania (@hotelt) on Jul 1, 2018 at 2:04pm PDT
Swipe through to meet the #HotelT3 cast and their characters – don’t miss them in theaters July 13th! ??
A post shared by Hotel Transylvania (@hotelt) on Jun 8, 2018 at 12:36pm PDT
ပွဲကိုတက်လာတဲ့ Gomez ဟာ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပါပဲ။ ပြီးတော့ သူမဟာ အဲဒီပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ မီဒီယာတချို့နဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ဖြေခဲ့ရတုန်းကလည်း “ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မရှိသလောက်နည်းဖို့က အရေးကြီးတယ်” … ဆိုတဲ့စကားကို အစချီပြီး ကျန်တဲ့စကားတွေကို ဆက်ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အားလုံးကို ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာပါပဲ။ ကျွန်မအနေနဲ့ အခုအသက်အရွယ်မှာ သိလာတာ တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာပဲဖြစ်နေနေ သေချာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့လည်း လိုအပ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ လူတွေကိုလည်း ကျွန်မချစ်ပါတယ်”
Gomez ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းကလည်း Good Morning America အစီအစဉ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက သူမရဲ့ ကျောက်ကပ်ပြဿနာကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး လူမြင်ကွင်းတွေကနေ ခဏပျောက်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကတည်းက သူမနဲ့ Justin Bieber, သူမနဲ့ The Weelend စတဲ့ ချစ်မှုရေးရာ ကိစ္စလေးတွေက နည်းနည်း လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်လာကြပြီး ဘယ်တစ်ယောက်ကများ သူမရဲ့ မိဘတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေလာမလဲဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားလာကြသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုတော့လည်း အဲဒီချစ်သူဟောင်းတွေနဲ့ သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဟာ တစ်ခန်းရပ်သွားသလို ရှိနေခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံးမှာလည်း သူမဟာ သိပ်အလုပ်များနေခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံးတွေးထင်ထားတာက သူမဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုများ ခံစားနေရမလားရယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့လည်း Gomez ရဲ့ ပုံစံက ရင့်ကျက်မှုအပြည့်နဲ့ ကျော့မော့လန်းဆန်း နေခဲ့လေတာကို မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ နောက်လကျရင် အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ အဲဒီတော့ မွေးနေ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ET မီဒီယာက မေးလာတဲ့ အင်တာဗျူးမေးခွန်းကို သူမက အခုလိုပဲ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
“မွေးနေ့မှာတော့ အလုပ်ပဲ လုပ်ဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကောင်းပါတယ်”
လောလောဆယ်မှာတော့ သူမဟာ အားလပ်ချိန်တွေမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အရင်းအချာတချို့နဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: ဖခင်ဖြစ်သူ Eminem ပါဝင်တဲ့ ရှိုးပွဲကို သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ Hailie Scott
NEXT POST Next post: ပြန်တွဲနေတာ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ The weeknd နဲ့ Bella